ZIMSEC Archives - Page 3 of 3 - iHarare News
Allen Brown	 Oct 10, 2019 0
The Zimbabwe School Examinations Council (Zimsec) has announced that results for the June 2019 ‘O’ and ‘A’ examinations are now out. Announcing the results, Zimsec said, The Zimbabwe School Examinations Council would…
If You Are Failing To Access Zimsec O’ Level Results On The Internet, Use This Address
Since Zimsec announced that the Ordinary Level results for the November 2018 Examinations are available online parents and students have been complaining that they are failing to access the Zimsec website. And they are correct.…
The Zimbabwe School Examinations Council (ZIMSEC) has released the Ordinary Level results for the November 2018 examinations. According to the exams body the results can now be accessed online although the pass rate is still a disappointing…
Just In: Grade 7 Results Are Out
The Zimbabwe School Examinations Council (ZIMSEC) has just announced that the results for the October 2018 Grade 7 examinations are out. According to Zimsec Board chairperson, Professor Eddie Mwenje, parents and candidates will be…
‘No rewrites!’ZIMSEC rubbishes re-sit for ‘leaked’ Maths & English papers
ZIMSEC rubbishes re-sit for 'leaked' Maths & English papers The Zimbabwe Schools Examination Council (Zimsec) has rubbished social media rumors claiming that there would be a re-sit for three examination papers that…